Google Ads लागि Microsoft Teams
clever ads MS Teams साथ लग ईन गर्नुहोस्
MS Teams साथ लग ईन गर्नुहोस्
Microsoft Teams Google Ads , माईक्रोसफ्ट विज्ञापन र फेसबुक विज्ञापनहरूको लागि एकीकरण
Microsoft Teams च्याटमा अनुकूलन चेतावनी प्राप्त गर्नुहोस्।
तपाईंको विज्ञापन खाता लागि विशेष बनाएको रेखांकन छ।
या त एक दैनिक वा साप्ताहिक आधार मा आफ्नो मापन प्राप्त गर्न तालिका।
Microsoft Teams जोड्नुहोस्
Clever Ads फाइदा
हामी भन्न जस्तै, तपाईं बिहान कफी तिमीलाई धेरै माया गर्छु रमाइलो गर्न पर्याप्त समय बचत हुनेछ! ☕
तपाईंको समय बचत!
Google Ads , बिंग विज्ञापन र फेसबुक विज्ञापन मेट्रिकहरू एक ठाउँमा देखेर तपाईंको अनमोल समय बचत गर्नुहोस्। ती ट्याबहरू मध्ये केही बन्द गर्नुहोस्!
थप कुशलतापूर्वक आफ्नो दैनिक कार्यहरू संगठित
यो एकीकरणको साथ, तपाईं मेट्रिक्स, ग्राफहरू, र सतर्कताहरू प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ तपाईंको अभियानको प्रगति मूल्याate्कन गर्न, सबै Microsoft Teams मार्फत!
शुल्क को पूर्ण मुक्त!
Clever Ads , बजारमा अन्य समान उपकरणहरूसँग विपरित, तपाईंलाई यसको प्रयोग गर्नको लागि शुल्कको आवश्यक पर्दैन।
तपाईंको मनपर्ने ads खाताहरू फिल्टर गर्नुहोस् र मेट्रिक्स र ग्राफहरूमा प्रदर्शन सारांश प्राप्त गर्नुहोस्।
आफ्नो ड्यासबोर्डमा नियन्त्रण
तपाइँको ड्यासबोर्डमा पहुँच गर्नुहोस् र तपाइँले कसरी Microsoft Teams माध्यमबाट आफ्नो मेट्रिक्स प्राप्त गर्नुहुन्छ व्यक्तिगत रूपमा अनुकूलित गर्न सक्षम हुनुहोस्। फिल्टर गर्नका लागि तपाईले कुन खाताहरू हेर्न चाहानुहुन्छ, तपाईको रिपोर्ट अनुसूची गर्नुहोस् र तपाईको अलर्टहरू कन्फिगर गर्नुहोस् ।
Microsoft Teams लागि Clever Ads अनुप्रयोग किन स्थापना गर्ने?
महत्त्वपूर्ण मेट्रिक्स सीधा Microsoft Teams मार्फत उपलब्ध हुनेछ। यी मेट्रिक्स प्रभावहरू, क्लिकहरू, र अधिक हुनसक्दछन्, तपाईंको Google Ads र बिंग विज्ञापन अभियानहरूका सम्बन्धमा।
नेत्रहीन आफ्नो मापन को कुनै पनि को विकास पालन गर्न एक ग्राफ प्रयोग गर्नुहोस्। यो छाप, लागत, वा रूपान्तरण दर हुन कि।
दैनिक वा साप्ताहिक सारांशमा प्राप्त गर्न विकल्प छ, र आफ्नो टीम हेर्न को लागि उनलाई सार्वजनिक, वा मात्र आफ्नो आँखा लागि।
हामी तपाईंको Google Ads लागि सुधारको बारेमा सुझावहरू प्रदान गर्दछौं Google Ads तपाईंको अनुरोध मा रणनीति। हामी तपाईंको अभियानहरू सल्लाह दिन सक्छौं जस्तै यसको बजेट समायोजन गर्ने, यसको लक्ष्य परिमार्जन गर्न, र अझ बढि।
तपाईं कसरी सुरू गर्छन्?
लगभग एक मिनेटमा, तपाइँ तपाइँको खातामा सिधा Microsoft Teams लागी Clever Ads
मात्र4कदम
तपाईंले गर्नुपर्ने भनेको " Microsoft Teams थप्नुहोस्" बटन क्लिक गर्नुहोस् र तपाईंसँग यो हुनुपर्दछ
तपाईंको विज्ञापनदाता खातामा साइन इन
साइन इन आफ्नो Google, Facebook, र Microsoft खाता तपाईंको विज्ञापन खातामा जोडिएको छ कि / वा
तपाईंको खाता छनौट
आफ्नो वांछित खाता छनौट पछि, कुनै पनि समयमा कुनै पनि अरूलाई स्विच गर्न स्वतन्त्र महसुस
अनुप्रयोगको धेरै सुविधाहरू उपयोग
सहज र सुविधाजनक माथि उल्लेख सबै रिपोर्ट प्राप्त
तपाईं राम्रो कम्पनी मा हुनेछु
Freaking-बाहिर प्रश्नहरू बारे?
यदि तपाईंसँग एउटा प्रश्न छ कि तल उत्तर दिईएको छैन भने तपाईं हामीलाई assistant@cleverads.com
यो अनुप्रयोग ठीक के गर्छ?
यस अनुप्रयोगको उद्देश्य तपाईको जीवन अलि सजिलो बनाउनु हो र हामी "त्यस बिहानको कफीको लागि तपाईलाई यति धेरै मन पराउने पर्याप्त समय बचाउन चाहन्छौं।" Google Ads खाता लिंक गर्नुभयो जुन तपाईंसँग काम गर्न चाहानुहुन्छ, तपाईं आफ्नो Slack वा Microsoft Teams च्याटमा सिधै बोटलाई टेक्स्ट गरेर मेट्रिक्स र ग्राफहरू प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। यस तरीकाले, तपाईं आफ्नो बहुमूल्य समय बचत गर्दै हुनुहुन्छ किनकि तपाईंले प्रत्येक दिन Google Ads
अनुप्रयोगले प्रस्ताव गर्न सक्ने केही राम्रा सुविधाहरू हुन्:
मेट्रिक्स र ग्राफहरू : महत्वपूर्ण मेट्रिक्स र तपाईंको Google Ads खातासँग सम्बन्धित ग्राफहरू जस्तै छापहरू, रूपान्तरणहरू, क्लिकहरू, र अधिक धेरै तपाईंको कुराकानीमा सिधा उपलब्ध हुनेछ।
अनुसूचित रिपोर्टहरू : तपाईंको टोलीका लागि सार्वजनिक बनाउन तपाईंको मनपर्ने दैनिकमा तपाईंको मेट्रिक्स दैनिक वा साप्ताहिक प्राप्त गर्नुहोस् वा प्रत्यक्ष सन्देश विकल्प छनौट गरेर यसलाई आफैंमा राख्नुहोस्।
सुझाव : सरल सन्देशको माध्यम मार्फत सबै Google Ads रणनीति कसरी सुधार गर्ने बारे सुझावहरूको लागि सोध्नुहोस्। हामी अभियानको बिभिन्न प्रकार थप्ने, अभियानको बजेट समायोजन गर्ने, वा अभियान लक्ष्य परिमार्जन गर्ने जस्ता चीजहरूको सुझाव दिन सक्षम हुनेछौं।
आउँदो सतर्कताहरू Google Ads खाताहरूको साथ अधिक सुरक्षित महसुस गर्नुहोस्। Clever Ads बोटले तपाईंलाई सूचित गर्नेछ यदि तपाईंको खातामा केहि अनौंठो भइरहेको छ।
अनुप्रयोगलाई 100% निःशुल्क छ!
किन मैले मेरो Google Ads लिंक गर्नु पर्छ Google Ads खाता?
अनुप्रयोग सही रूपमा चल्नको लागि क्रममा, यो तपाईंको Google Ads खाताबाट डाटा आवश्यक पर्दछ। सुरक्षा उद्देश्यका लागि गुगलले कसैलाई पनि तपाईंको मेट्रिक्स पूर्वनिर्धारित रूपमा हेर्न अनुमति दिदैन, त्यसैले हामीलाई तपाईंको अनुमति चाहिन्छ। Google Ads खातामा निम्न स्तरको पहुँच आवश्यक पर्दछ जुन भनिन्छ "तपाइँको Adwords अभियानहरू प्रबन्ध गर्नुहोस्"। यो अनुमतिको मात्र प्रकार हो जुन हामीलाई तपाईंको मेट्रिकमा जाँच गर्नका लागि चार्ट र सारांश उत्पन्न गर्न हामीलाई मात्र अनुमति दिनुपर्दछ।
के यो मेरो Google Ads लिंक गर्न सुरक्षित छ? Google Ads खाता?
यो १००% सुरक्षित छ! Clever Ads एक प्रिमियर गुगल पार्टनर हो। यो शीर्षक प्राप्त गर्नका लागि हामीले गुगलको उच्च मापदण्ड र मापदण्ड पूरा गर्नुपर्नेछ। वर्षौंको बर्षमा हामीले विकास गरेका बिभिन्न उत्पादनहरूले १ 150०,००० व्यवसायका बीच कडा प्रतिष्ठा स्थापित गरेका छन्।
मेरो डाटा कसरी सुरक्षित राखिएको छ?
एकचोटि तपाईले गुगल खातामा साईन ईन गर्नुभयो भने हामी हाम्रो ईन्क्रिप्टेड डाटाबेसमा पहुँच टोकन बचत गर्दछौं। कुञ्जी केवल हाम्रो Clever Slack वा Microsoft Teams कहिले पनि सेयर हुँदैन। Google Ads प्रासंगिक डाटा प्राप्त गर्छौं, हामी यसलाई फर्म्याट Slack वा Microsoft Teams सन्देशमा रूपान्तरण गर्दछौं, र हामी यो कुराकानीमा पठाउँदछौं जुन तपाईंले आदेश पठाउनुभयो।
प्रत्येक सन्देश चाहे यो आन्तरिक Slack वा गुगल, स्ल्याक, वा Microsoft Teams टिम्सको साथ ईन्क्रिप्ट गरिएको छ TLS १.२ (यातायात तह सुरक्षा)। हामी केवल HTTPS प्रोटोकलको साथ साइटहरू पहुँच गर्दछौं। हाम्रो अन्तबाट, हामी केवल तपाईंको Google Ads मेट्रिक्समा पहुँच गर्न सक्दछौं किनकि तपाईंले हामीलाई त्यसो गर्न अनुमति दिईएको छ। कुनै पनि परिस्थितिमा हामीलाई भनिएका प्यारामिटरहरूभन्दा बाहिरको डाटा समात्न अनुमति छैन।